I-Concerta vs. Ritalin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Ukuphila Kahle Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo Inkampani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Ezemidlalo Ezisindayo Ukuphuma Cindezela Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izindaba Izindaba, Wellness Umphakathi, Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Concerta vs. Ritalin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Concerta vs. Ritalin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Izidakamizwa Vs. Umngani
Ukubuka konke kwezidakamizwa nokwehluka okuyinhloko | Izimo zilashwa | Ukusebenza | Ukutholakala komshuwalense nokuqhathaniswa kwezindleko | Okuqhamuka uma udla imishanguzo | Ukusebenzisana kwezidakamizwa | Izexwayiso | Imibuzo evame ukubuzwa
Uma wena noma ingane yakho utholwe une-ADHD, umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo kungenzeka ukuthi ukhulume ngemithi yokuzama ye-ADHD njengengxenye yohlelo olunzulu lokwelashwa kwezempilo yengqondo, kufaka phakathi izinsiza zenhlalo, zokuziphatha nezemfundo. I-ADHD kuvamile : Izingane eziyizigidi ezingama-6.4 ezineminyaka engu-4 kuya kwengu-17 e-U.S. Zitholakale zine-ADHD, kanti abantu abadala abane% bane-ADHD.
IConcerta neRitalin yimithi emibili evuselelayo ye-ADHD evunyelwe yi-United States Food and Drug Administration (FDA). Yomibili le mithi kadokotela ikhonjiswa ekwelashweni kwe-ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Yomibili le mithi iqukethe isithako esifanayo, i-methylphenidate. IConcerta iqukethe ifomu elisebenza isikhathi eside le-methylphenidate, kanti iRitalin iqukethe ifomu elikhipha ngokushesha le-methylphenidate. IConcerta noRitalin basebenza ngokusebenza kwi-CNS (uhlelo oluphakathi lwezinzwa) ukukhulisa amazinga e-dopamine ne-norepinephrine ebuchosheni, okusiza ukuthuthukisa izimpawu ze-ADHD njengokugxila nokuqwashisa.
Zombili lezi zidakamizwa zihlukaniswa njenge Isheduli II izidakamizwa yiDrug Enforcement Administration (DEA), okusho ukuthi kunamandla amakhulu okusebenzisa kabi izidakamizwa kanye nokuncika.
Yize uConcerta noRitalin zombili izikhuthazi eziqukethe i-methylphenidate, zinokwehluka okuthile. Qhubeka ufunde ngezansi ukuze ufunde kabanzi ngeConcerta noRitalin.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kukaConcerta noRitalin?
IConcerta neRitalin bobabili bahlukaniswa njengemithi evuselelayo futhi yomibili iyatholakala ngegama lomkhiqizo nangefomu ejwayelekile. Igama elijwayelekile likaConcerta yi-methylphenidate (ukukhululwa okunwetshiwe). IConcerta yenzelwe ukuhlala cishe amahora ayi-12, futhi idosiwa kanye ngosuku.
Igama elijwayelekile likaRitalin yi-methylphenidate futhi iyithebhulethi ekhishwa ngokushesha. Umthamo owodwa weRitalin uhlala cishe amahora amane, ngakho-ke wenziwa ngomthamo kaningi, imvamisa izikhathi ezimbili kuya kwezintathu ngosuku.
Ezinye izinhlobo zikaRitalin zisebenza isikhathi eside. I-Ritalin-LA iyi-capsule esebenza isikhathi eside (etholakala nge-brand ne-generic) kanti i-Ritalin-SR (etholakala ngohlobo olujwayelekile) iyithebhulethi esebenza isikhathi eside. URitalin LA unokukhishwa kwe-bi-modal. Ingxenye ye-methylphenidate ikhishwa ngokushesha, kuthi ingxenye yesibili ikhishwe ngokuhamba kwesikhathi. Umthamo weRitalin LA uhlala cishe amahora ayisishiyagalombili kuya kwayishumi. Umthamo weRitalin-SR uhlala cishe amahora ayisishiyagalombili.
Ubude bokwelashwa neConcerta noma iRitalin buyahlukahluka. Ezinye iziguli zithatha i- iholide lezidakamizwa , lapho umuthi umiswa khona okwesikhashana, ngokwesibonelo, ngesikhathi seholide lasehlobo lapho isikole singekho esimisweni. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo angakusiza unqume ukuthi wena noma ingane yakho kufanele nithathe iholide lezidakamizwa.
ingabe idiphozi idala isisindo
Umehluko omkhulu phakathi kukaConcerta noRitalin
Isigaba sezidakamizwa Okukhuthazayo Okukhuthazayo
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Umkhiqizo nokujwayelekile Umkhiqizo nokujwayelekile
Ngubani igama elijwayelekile? Imethylphenidate hydrochloride enwetshiwe I-Methylphenidate hydrochloride
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Ithebhulethi yokukhishwa enwetshiwe Ithebhulethi, i-capsule ekhishwe isikhathi eside (Ritalin LA), ithebhulethi ekhishwa enwetshiwe (Ritalin-SR)
Uyini umthamo ojwayelekile? I-18, 36, 54, noma i-72 mg kanye ngosuku nsuku zonke ekuseni (umthamo uncike kubudala, isisindo, nokuphendula ekwelashweni) Izingane:
5 mg kabili ngosuku ukuqala, umthamo ungakhuphuka kancane
Isilinganiso sedosi yansukuzonke singama-20 kuye kwangama-30 mg ngemithamo ehlukanisiwe izikhathi ezi-2 kuye kwezingu-3 nsuku zonke (isibonelo: I-10 mg enikezwe izikhathi ezi-3 nsuku zonke ilingana nomthamo wansuku zonke we-30 mg)
Yelashwa isikhathi esingakanani? Kuyahluka: kungadingeka isikhathi eside kepha kungakafundwa isikhathi esingaphezu kwamasonto ayi-7; thintana nomhlinzeki wezempilo Iyahluka: kungadingeka isikhathi eside; thintana nomhlinzeki wezempilo
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Iminyaka engu-6 kuye kwengama-65 Iminyaka engu-6 kuya kumuntu omdala
Ufuna intengo engcono kuRitalin?
Bhalisela izexwayiso zamanani eRitalin bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Thola izexwayiso zentengo
Izimo eziphathwe yiConcerta noRitalin
I-Concerta neRitalin zombili zikhonjisiwe ukwelashwa kwe-ADHD ezinganeni ezineminyaka engu-6 nangaphezulu, intsha , futhi abantu abadala . URitalin ubuye akhonjiswe nge-narcolepsy. IConcerta noma iRitalin kufanele isetshenziswe njengengxenye yohlelo oluphelele lwezokwelapha olungafaka ukwelashwa nokungenelela kwezemfundo.
Isimo Ikhonsathi URitalin
Ukunakwa Kwe-Attic Defence Hyperactivity Disorder (ADHD) ezinganeni ezineminyaka engu-6 nangaphezulu, intsha, nabantu abadala abafinyelela eminyakeni yobudala engama-65 Yebo Yebo (imininingwane yomkhiqizi kaRitalin ayisho iminyaka yobudala)
Ukuxokozela Ngaphandle kwelebula Yebo
Ngabe iConcerta noma iRitalin isebenza kangcono?
Azikho izifundo eziqhathanisa ngqo iConcerta kanye neRitalin ekhishwa ngokushesha. Izilingo zomtholampilo zeConcerta wafunda iziguli ezithatha iConcerta, iRitalin, noma i-placebo; kodwa-ke, imiphumela yaqhathanisa iConcerta ne-placebo kuphela futhi ayizange ifake uRitalin. Imiphumela ikhombise ukuthi iConcerta ibingcono kune-placebo, kepha ayikhombisanga imiphumela maqondana noRitalin.
Uma uqhathanisa i-Concerta ne-Ritalin, khumbula ukuthi yomibili le mithi iqukethe i-methylphenidate, ngakho-ke sibheke umuthi ofanayo. Umehluko usezindleleni ezithakwa ngayo izidakamizwa nokuthi zihlala isikhathi esingakanani. IConcerta ihlala cishe amahora ayi-12 futhi idosiwa kanye nsuku zonke ekuseni, ngakho-ke kungaba yindlela engcono kumuntu okufanele agxile amahora amaningi futhi angafuni ukuthatha imithamo eyengeziwe yemithi. URitalin, osebenza cishe amahora amane, angaba yindlela engcono kumuntu odinga nje amahora ambalwa wokuthakwa kwemithi noma umuntu onganaki ukuthatha imithamo eyengeziwe lapho kudingeka.
ungathatha i-tylenol noma ibuprofen lapho ukhulelwe
Isidakamizwa esisebenza kakhulu kuwe kufanele sinqunywe ngumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ongacabangela isimo sakho sezokwelapha kanye nomlando wakho wezokwelapha neminye imithi oyiphuzayo engasebenzisana neConcerta noma iRitalin. Xhumana nommeli wakho ukuze uthole iseluleko sezokwelapha.
Ufuna intengo engcono ku-Concerta?
Bhalisela izexwayiso zentengo zeConcerta bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zokuqhathaniswa kweConcerta vs.Ritalin
IConcerta ngokuvamile ayimbozwa yiMedicare Part D. Ingambozwa ngumshuwalense, imvamisa ifomu layo elejwayelekile. Izindleko eziphuma ephaketheni zamaphilisi ejwayelekile angama-30 we-Concerta 36 mg angaba ngaphezu kwama- $ 300. Isigqebhezana se-SingleCare singanciphisa lezi zindleko zibe ngaphansi kuka- $ 150.
URitalin uvame ukumbozwa yiMedicare Part D futhi angahlanganiswa umshuwalense, imvamisa efomini ejwayelekile. Izindleko eziphuma ephaketheni ezingama-60 Ritalin 10 mg amaphilisi ajwayelekile acishe abe ngama- $ 85. Lezi zindleko zingancishiselwa ngaphansi kuka- $ 25 ngesigqebhezana se-SingleCare emakhemisi abamba iqhaza.
Thola ikhadi lesaphulelo se-SingleCare
Ngokuvamile embozwe umshwalense? Iyahlukahluka Iyahlukahluka
Imbozwe ngokujwayelekile yi-Medicare? Akunjalo Yebo
Umthamo ojwayelekile 30, 36 mg amaphilisi 60, 10 mg amaphilisi
I-Medicare copay ejwayelekile $ 230 $ 3- $ 48
Izindleko ze-SingleCare $ 130- $ 180 $ 23- $ 53
Imiphumela emibi ejwayelekile yeConcerta vs.Ritalin
Imiphumela emibi ejwayelekile yeConcerta ubuhlungu besisu, ukuncipha kwesifiso sokudla, ukwehla kwesisindo, ikhanda elibuhlungu, umlomo owomile, isicanucanu, izinkinga zokuqwasha / ukulala, ukukhathazeka, isiyezi, ukucasuka, kanye ne-hyperhidrosis (ukujuluka okwandayo). URitalin unemiphumela engemihle efanayo, kepha amaphesenti wemvamisa awekho ohlwini. Lolu akulona uhlu olugcwele lwemiphumela emibi. Imiphumela emibi kakhulu ingenzeka. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu olugcwele lwemiphumela emibi engenzeka ngeConcerta noma iRitalin.
Umphumela oseceleni Kusebenza? Imvamisa Kusebenza? Imvamisa
Ubuhlungu besisu phezulu Yebo 6.2% Yebo Akubikiwe *
Ukwehla kwesifiso sokudla / ukuncipha kwesisindo Yebo ≥5% Yebo Akubikiwe
Ubuhlungu bekhanda Yebo ≥5% Yebo Akubikiwe
Umlomo owomile Yebo ≥5% Yebo Akubikiwe
Isicanucanu Yebo ≥5% Yebo Akubikiwe
Ukuthukuthela Yebo ≥5% Yebo Akubikiwe
Ukukhathazeka Yebo ≥5% Yebo Akubikiwe
Ukujuluka okweqile Yebo ≥5% Yebo Akubikiwe
Ukuhlanza Yebo 2.8% Yebo Akubikiwe
Imfiva Yebo 2.2% Yebo Akubikiwe
Ukutheleleka okuphezulu okuphefumula Yebo 2.8% Yebo Akubikiwe
Isiyezi Yebo 1.9% Yebo Akubikiwe
Ukuqwasha Yebo 2.8% Yebo Akubikiwe
Khwehlela Yebo 1.9% Yebo Akubikiwe
* Amaphesenti angabikwa noRitalin
Umthombo: DailyMed ( Ikhonsathi ), IDailyMed ( URitalin )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kweConcerta kuqhathaniswa noRitalin
I-Concerta noma i-Ritalin akufanele ithathwe ngama-MAOIs (monoamine oxidase inhibitors) ngoba inhlanganisela ingadala inkinga ye-hypertensive (umfutho wegazi ophakeme). IConcerta noma iRitalin kufanele yehlukaniswe yi-MAOI okungenani izinsuku eziyi-14. I-Concerta noma i-Ritalin kufanele isetshenziswe ngokuqapha ngama-vasopressor agents (imithi esetshenziselwa ukwandisa umfutho wegazi) ngenxa yamandla okwenyuka kwengcindezi yegazi. IConcerta noma iRitalin ingakhuphula amazinga e-warfarin, ama-anticonvulsants athile, kanye ne-tricyclic noma i-SSRI antidepressants. Ukulungiswa komthamo kungadingeka uma kuthathwe neConcerta noma iRitalin. I-Concerta noma i-Ritalin inganciphisa ukusebenza kwe-diuretics noma imishanguzo yegazi. Lolu akulona uhlu olugcwele lokusebenzisana kwezidakamizwa. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu oluphelele lokuhlangana kwezidakamizwa.
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa Ikhonsathi URitalin
I-Tranylcypromine MAOI Yebo Yebo
I-Phenylephrine Ama-Vasopressor agents Yebo Yebo
I-Warfarin I-Anticoagulant Yebo Yebo
Sertraline Izidakamizwa ze-SSRI Yebo Yebo
I-Nortriptyline I-Tricyclic antidepressants Yebo Yebo
I-Primidone Ama-anticonvulsants Yebo Yebo
I-Hydrochlorothiazide Izidakamizwa Yebo Yebo
Olmesartan Ama-antihypertensives Yebo Yebo
Izexwayiso zikaConcerta noRitalin
Uzothola umhlahlandlela wemithi njalo uma ugcwalisa incwadi kadokotela yeConcerta noma iRitalin, equkethe izexwayiso nolwazi ngemiphumela engemihle. I-Concerta noRitalin bobabili bane- isexwayiso sebhokisi , okuyisixwayiso esiqine kakhulu esidingwa yi-FDA. Ngenxa yengozi yokuhlukunyezwa noma ukuncika, iziguli kufanele zihlolwe ukuthi zingabhekana nobungozi bokuhlukunyezwa ngaphambi kokuba zinikezwe iConcerta noma iRitalin. Iziguli ezithatha iConcerta noma iRitalin kufanele ziqashwe ngezimpawu zokuhlukunyezwa ngesikhathi sokwelashwa.
Ukufa okungazelelwe kubikwe ngemithi evuselelayo, noma ngemithamo ejwayelekile. Lokhu kwenzeke ezinganeni / kwentsha enezinkinga ezithile zenhliziyo noma izinkinga. Ukufa okungazelelwe, isifo sohlangothi nokuhlaselwa yinhliziyo kuye kwabikwa kubantu abadala. Le micimbi kungenzeka yenzeke kubantu abadala abanezinkinga zenhliziyo noma ezinye izinkinga zenhliziyo. Ngakho-ke, izikhuthazi ezifana neConcerta noma iRitalin akufanele zisetshenziswe ezinganeni, ebusheni, noma kubantu abadala abanezinkinga zenhliziyo noma ukungajwayelekile.
Umfutho wegazi kanye / noma ukushaya kwenhliziyo kunganda; iziguli kufanele ziqashwe. Iziguli ezinengcindezi yegazi noma izinkinga zenhliziyo kufanele ziphathwe ngokuqapha.
Ukuzwela ngokweqile akuvamile kepha kungenzeka. Uma unenkinga yokuphefumula, noma ukuvuvukala kobuso, umphimbo, ulimi, noma intamo, yeka ukuthatha iConcerta noma iRitalin bese ufuna ukwelashwa okuphuthumayo.
Izikhuthazi zingakhuphula izimpawu zokuphazamiseka kokuziphatha nokuphazamiseka kwemicabango ezigulini ezinesifo se-psychotic esivele sikhona, njenge-bipolar disorder. Iziguli kufanele zihlolwe ngaphambi kokuqala ukuvuselela.
Iziguli eziqala ukwelashwa kwe-ADHD kufanele zibhekwe ukubonakala noma ukwanda kokuziphatha okunolaka noma ubutha.
Izikhuthazi zinganciphisa umkhawulo wokubanjwa kweziguli ezinomlando wangaphambi kokuquleka. Uma ukuqubuka kwenzeka, umuthi kufanele unqamuke.
I-Priapism (ukwakhiwa okude, okubuhlungu) kwenzeke. Uma lokhu kwenzeka, funa usizo lwezokwelapha ngokushesha.
Iziguli ezikuConcerta noma iRitalin kufanele ziqashelwe i-peripheral vasculopathy, kufaka phakathi into kaRaynaud.
Ukukhula kwezingane kufanele kubhekwe ngesikhathi sokwelashwa okuvuselelayo. Izingane ezelashwa izinsuku eziyisikhombisa ngesonto unyaka wonke zingancipha okwesikhashana emazingeni okukhula.
Ukubona okufiphele kungenzeka. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uma lokhu kwenzeka.
I-CBC, umehluko, nokubalwa kweplatelet kufanele kuhlolwe ngezikhathi ezithile.
Ngenxa yesimo sethebhulethi yeConcerta, iziguli ezinezinkinga ezithile ze-GI (emathunjini) akufanele zithathe iConcerta. Lokhu kungenxa yokuthi ithebhulethi ayishintshi ukwakheka kwepheshana le-GI futhi ingadala ukuphazamiseka.
Ithebhulethi yeConcerta kufanele igwinywe iphelele futhi akufanele ihlafunwe, yehlukaniswe, noma ichotshozwe. Igobolondo (elingasebenzi) lethebhulethi lingavela esitokisini.
Amaphilisi e-Ritalin-SR kufanele agwinywe ephelele futhi angahle achotshozwe noma ahlafunwe.
Ama-capsules eRitalin LA kufanele agwinywe ephelele, futhi akufanele achotshozwe, ahlafunwe, noma ahlukaniswe. Noma, ungavula i-Ritalin LA capsule bese ufafaza ubuhlalu ngaphezulu kwesipuni esisodwa se-appleauce bese uyidla ngokushesha. Ungayigcini le ngxube ukuze uyisebenzise esikhathini esizayo.
Imibuzo evame ukubuzwa mayelana neConcerta vs. Ritalin
I-Concerta iyisikhuthazi esisetshenziselwa ukwelapha i-ADHD. Iqukethe uhlobo olusebenza isikhathi eside lwe-methylphenidate futhi luthathwa kanye ngosuku.
I-Ritalin iyisikhuthazi esine-methylphenidate futhi isetshenziselwa ukwelapha i-ADHD noma i-narcolepsy. Imvamisa ithathwa kabili noma kathathu nsuku zonke ngoba iyasebenza okwesikhashana. Izinhlobo ezisebenza isikhathi eside zikaRitalin ziyatholakala, nazo.
ungathola u-c ohlukile kuma-antibiotic
Ngabe uConcerta noRitalin bayafana?
IConcerta neRitalin zombili ziqukethe isithako esisebenzayo esifanayo, i-methylphenidate. Kodwa-ke, iConcerta yenzelwe ukuthi ihlale cishe amahora ayi-12, ngakho-ke idosiwa kanye ngosuku ekuseni. URitalin, esesimweni sokudedelwa ngokushesha, udoselwa kabili noma kathathu nsuku zonke ngoba usebenza isikhashana.
Ezinye izibonelo zemithi efanayo evuselelayo ongahle uzwe ukuthi ifaka phakathi UVyvanse , Quillivant XR, futhi Adderall (usawoti wama-amphetamine), phakathi kwabanye.
Ngabe iConcerta noma uRitalin ingcono?
Azikho izifundo eziqhathanisa ngqo uConcerta noRitalin. Ngoba zombili lezi zidakamizwa ziqukethe i-methylphenidate, ukukhetha ukuthi yisiphi isidakamizwa ongasisebenzisa kuzoxhomeka ezintweni eziningi, njengokuthi yisiphi isidakamizwa esifanele uhlelo lwakho, yisiphi isidakamizwa esizolungela indlela yakho yokuphila, nempendulo yakho ekwelashweni. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo angakusiza unqume ukuthi ngabe i-Concerta noma i-Ritalin iyisidakamizwa esifanele wena.
Ngingayisebenzisa iConcerta noma iRitalin ngikhulelwe?
IConcerta neRitalin bakusigaba C ekukhulelweni, okusho ukuthi azikho izifundo zemithi ekukhulelweni komuntu, kepha lokho kufundwa kwezilwane kukhombisile ukuthi kukhona ingozi embungwini. Ngokuvamile, iConcerta noma iRitalin ayisetshenziswa ekukhulelweni. Uma uthatha uConcerta noma uRitalin bese uthola ukuthi ukhulelwe, xhumana nommeli wakho ngokushesha.
Ngingayisebenzisa iConcerta noma iRitalin ngotshwala?
Uma uthatha isikhuthazi esifana neConcerta noma uRitalin, kufanele gwema utshwala . Ngenkathi izikhuthazi ziphezulu, utshwala buyaphansi. Ziyasebenzisana, futhi ungazizwa ungadakwanga kangako, okukubangela ukuthi uphuze kakhulu, okungaholela ezingozini noma ku-ushevu wotshwala (okungadala ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile, ubunzima bokuphefumula, isicanucanu, ukuhlanza, kanye / noma ukuquleka).
Ngabe uRitalin uyisivinini?
Ijubane yi-methamphetamine. I-Adderall, esinye isidakamizwa se-ADHD, siqukethe usawoti i-amphetamine (amphetamine ne-dextroamphetamine), ahlobene namakhemikhali ne-methamphetamine. Ijubane, noma i-methamphetamine, iyilutha kakhulu kune-Adderall. Futhi inobuthi futhi ingadala ukulimala kwengqondo, ukulimala kwenhliziyo, ukubola kwamazinyo, nezinye izinkinga. Ukungasho, i-methamphetamine ivame ukutholakala emgwaqweni, okuyingozi.
URitalin uqukethe i-methylphenidate. Njengo-Adderall, uRitalin uyashukumisa futhi uyafana namakhemikhali afana ne-amphetamines. Njengomuthi weSheduli II, uRitalin unamandla amakhulu okuhlukumeza nokuncika. Uma wena noma ingane yakho nithatha i-Ritalin (noma imiphi imishanguzo ye-ADHD), kufanele niqashwe ngeso elibukhali ngummeli wakho.
IConcerta izongenza ngizizwe kanjani?
I-Concerta kufanele isize ukuthuthukisa izimpawu ze-ADHD. Kungathatha ukulungiswa komthamo kuze kube yilapho umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ekutholela isilinganiso esifanele. Eminye imiphumela emibi ejwayelekile yeConcerta ubuhlungu besisu, ukuncipha kwesifiso sokudla, ukwehla kwesisindo, ikhanda elibuhlungu, umlomo owomile, isicanucanu, izinkinga zokulala, ukukhathazeka, isiyezi, ukucasuka, nokujuluka okwandayo. Uma uneminye imiphumela emibi ebucayi noma enenkinga (njengokuqubuka noma ukuphefumula kanzima), yazisa umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngokushesha.
Ngabe iConcerta iyabuguqula ubuntu bakho?
Imithi ye-ADHD akufanele ishintshe ubuntu bakho (noma bengane yakho). Noma yiziphi izinguquko ezingavamile ebuntwini kungaba ngumphumela wokuthatha kakhulu umthamo. Uma ubona izinguquko zobuntu, xhumana nommeli wakho mayelana nokwehlisa umthamo noma ukushintsha umuthi.
Isikali seLasix, amafomu, namandla
ICefdinir vs. amoxicillin: Umehluko, ukufana, futhi okungcono kuwe
Mncane kangakanani umncane kakhulu ukuthola izidakamizwa zokulwa nengcindezi? Uneminyaka emingaki ubudala?
Kwenzekani uma uxuba i-Ambien notshwala?
Ukungezwani komzimba kanye nezimpawu ze-coronavirus: Nginaphi?
Izengezo ezidume kakhulu ku-SingleCare ngoJuni
I-Xyzal vs. Zyrtec: Umehluko, ukufana nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Abasebenzisi be-SingleCare babona ukonga okukhulu kulezi zidakamizwa eziyi-10
Ungakuthola kanjani okokuhlinzeka kwamahhala ngesifo sikashukela
Kwenzekani uma uxuba iLatuda notshwala?
Ngingayonga kanjani imithi yami?
I-Diclofenac vs. ibuprofen: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
yini engcono kubuhlungu ibuprofen noma i-acetaminophen
umthamo omkhulu we-ibuprofen ngosuku
yini i-cephalexin 500mg esetshenziselwa ukwelapha
indlela yemvelo yokususa ukutheleleka kwezindlebe
i-benadryl yokungezwani komzimba ne-benadryl
amanzi ashisayo esiteshini sokugeza izandla
Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa
Copyright © Wonke Amalungelo Agodliwe | covidografia.pt